Huawei EMUI 5.0 ga -enwe nnukwu mgbanwe na imewe maka ọdịda | Androidsis
Ụdị oyi akwa nke ọ bụla n'ime ndị nrụpụta bụ paswọọdụ nke ha ji amata onwe ha na ekwentị ndị ọzọ mgbe onye ọrụ na -agagharị na desktọpụ, drawer ngwa, wijetị, ogwe ọkwa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ mejupụtara ya. N'akụkụ nke Huawei metụtara EMUI ya, na 4.1 ọ natala ụfọdụ ndozi na -atọ ụtọ, mana ọ dị ka na 5.0 a ga -enwe nnukwu nrụzigharị na interface ahụ.
Huawei ga na -arụ ọrụ na ụdị 5.0 na echiche nke ịbịaru interface ahụ nso purest version nke gam akporo mana site n'ịdị mma nke ịnye ọtụtụ nhazi. Yabụ na anyị ga -enwe onye nrụpụta ọzọ ga -agbaso nzọụkwụ Motorola na Sony iji weta ụdị vanilla nke gam akporo, ihe ga -emeju ọtụtụ ndị ọrụ, ebe ahụmịhe onye ọrụ nke OS nyere maka ngwaọrụ mkpanaka Google sitere na Lollipop na -adọrọ mmasị nke ukwuu. .
Edere mgbanwe ndị a n'inweta akwa omenala EMUI na -atọkwu ndị na -ege ntị ụtọ karịa ọdịda anyanwụ. Nyere na Huawei nwere ọnụnọ buru ibu na Europe ma na -enweta ohere n'ahịa US, site na imeziwanye na nke a, interface ga -eme ka ọha mmadụ chọkwuo ngwaọrụ nke chọtara onye nrụpụta China dị ka otu n'ime akara ugbu a maka gam akporo.
Huawei ga -adị njikere ịmalite EMUI 5.0 oge nke atọ n'afọ nke atọ, n'echiche nke ịmalite ya n'oge ngosi IFA na Berlin yana mwepụta nke ọhụrụ Mate terminal. Ọ kwadebekwara ọnụ na DayDream, Android N VR.
Ndụmọdụ na -atọ ụtọ iji nweta akwa akwa nkeonwe gị tinye integers ịga n'ihu ọdụ ụgbọ elu dị elu, ebe ọ bụ na ngwaike ya, imewe na ọnụ ahịa onye nrụpụta China jisiri ike jikọta ha n'ụzọ nke ugbu a ọ bụ onye nrụpụta ekwentị nke atọ kachasị n'ụwa na Apple na Samsung na -ebute ụzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei's EMUI 5.0 Layer Custom iji nweta ihe okike buru ibu maka ọdịda